Waxaa jira arrimo badan oo saameeya saamaynta jeermiska ultraviolet iyo jeermis -dilaha.
Waxyaabaha saameeya saamaynta jeermis -dilaha ultraviolet iyo jeermis -dilaha waa:
) Guud ahaan, awoodda wax -soo -saarka ee laambadda UV ka dib isticmaalka 100h waa awoodda wax -soo -saarka la qiimeeyay, iyo waqtiga iftiiminta marka laambadda UV loo rogo 70% awoodda la qiimeeyay waa nolosha celceliska. Celceliska cimriga nolosha nalalka UV ee gudaha ayaa guud ahaan qiyaastii 2000h.
(2) Xaaladaha deegaanka: Guud ahaan, laambadda UV waxay leedahay saamaynta jeermis -dilaha ugu fiican marka heer -kulka cimiladu yahay 20 ℃ oo qoyaanka u dhigma uu yahay 40 ~ 60%. Marka heerkulku yahay 0 ℃, saamaynta jeermis -diliddu waxay ka yar tahay 60%.
(3) Masaafada Irradiation -ka: 500mm gudaheeda badhtamaha tuubada, xoojinta shucaaca ayaa si aan kala sooc lahayn u dhiganta masaafada, iyo in ka badan 500mm, xoojinta shucaaca ayaa qiyaas ahaan u dhiganta barbaradka masaafada.
(4) Bakteeriyada: Sababtoo ah dhismayaasha xuubka iyo qaababka kala duwan ee bakteeriyada, saamaynta jeermis -dilidda ee shucaaca ultraviolet ee bakteeriyada, taas oo ah, heerka jeermiska, sidoo kale wuu ka duwan yahay. Haddii badeecada xoojinta shucaaca iyo waqtiga shucaaca loo maleeyo inay tahay qiyaasta shucaaca, marka qiyaasta loo baahan yahay Escherichia coli ay tahay 1, waxay qaadataa qiyaastii 1 ilaa 3 staphylococcus, tubercle bacillus iyo wixii la mid ah, iyo ku saabsan subtilis iyo spores iyo khamiirka. Waxay qaadataa 4 ~ 8, iyo qiyaastii 2-50 caaryada.
(5) Habka rakibidda: Heerka gelitaanka ee shucaaca ultraviolet wuu hooseeyaa, waxaana aad u saameeya hababka gaashaanka iyo rakibidda. Qolka nadiifinta noolaha, guud ahaan waxaa jira dhowr hab oo rakibidda nalalka dhaadheer, nalalka dhinac, iyo nalalka saqafka, kuwaas oo ka mid ah nalalka saqafku ay leeyihiin saamaynta jeermis -diidka ugu fiican.
Sababtoo ah xaddidnaanta saamaynta bakteeriyada ultraviolet iyo saamaynta burburka leh ee jirka bini'aadamka oo laga yaabo inay sababto xilliga dhalmada, adeegsiga nalalka ultraviolet si loo nadiifiyo qolalka nadiifka ah ee bayoolojiga si dhif ah ayaa loo isticmaalaa, oo qolal gaar ah oo keliya ama qaybo qayb ah sida qolalka labiska, dhar -dhaqidda qolal, iwm ayaa la isticmaalaa. Waqtigan xaadirka ah, jeermis-dilaha ultraviolet ee inta badan la isticmaalo waa habka jeermis-wareegga wareegga gaaska oo lagu daray nidaamka HVAC.
Hore: Madhalaysnimo iyo madhalaysnimo
Xiga: Jeermiska ozone
Madhalaysnimo Iyo Madhalaysnimo
Wareegga xakamaynta farqiga cadaadiska nidaamka hawada
Heerkulka otomaatiga ah iyo xakamaynta huurka
Qaybta maaraynta hawada (AHU)
Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Daaqadda Qolka nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Qolka Nadiifka ah, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Habka Biyaha Qaboojiyay,